Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka oo dadweynaha u soo bandhigi doona cutubyo ka mid ah Dastuurka – Kalfadhi
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka oo dadweynaha u soo bandhigi doona cutubyo ka mid ah Dastuurka
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in 4 cutub, oo ka mid ah cutubyada Dastuurka Ku-meel-gaarka ah, ay u diyaariyeen in ay dadku ka aragti dhiibtaan, inta aan la horgeyn Baarlamaanka Soomaaliya. Cutubyada 6-aad ilaa 9-aad ayuu Guddigu maanta sheegay inuu u soo bandhigay Guddi ka kooban xubno ka kala tirsan Labada Guddi ee kan Baarlamaanka ee Dib-u-eegista Dastuurka iyo kan Madax-banaan ee Dastuurka, kadib shaqo farsamo oo ay maalmahaan ku hayeen.
“Ujeedada kulankan oo aheyd soo bandhigidda Guddiga Farsamada ee ka kooban labada guddi shaqadii ay ka soo qabteen cutubyada 6aad – 9aad ee Dastuurka KMG ah” ayaa lagu yiri war kooban oo lagu baahiye Feysbuugga Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodka Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Gud. Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka, Qeybdiid, oo dhageysanaya sharaxaad dastuurka ku saabsan
Cutubyadaas ayaa, sida uu Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanku sheegay, waxa si kala gaar-gaar ah uga soo shaqeeyey labada Guddi (Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka iyo kan Madax-banaan er Qaranka). “Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in 4 cutub, oo ka mid ah cutubyada Dastuurka Ku-meel-gaarka ah, ay u diyaariyeen in ay dadku ka aragti dhiibtaan” ayaa lagu yiri warka uu baahiyey Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka.
In cutubyadaan ay soo gaareen waqti laga fekero in dadka loo soo bandhigo inta aan la horgeyn Baarlamaanka, marka la fiiriyo shaqada laga soo qabtay dib-u-eegistooda, ayuu Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanku ku sheegay in ay timid markii ay maanta kulan arrinkaas ku saabsan uga yeeshaan 2-da Guddi ee Dastuurka ka shaqeysa Xarunta Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddiyada Dastuurka oo dhageysanaya sharaxaad ku saabsan cutubyada dastuurka ee laga shaqeeyey
Xildhibaan Cali Saciid: Waxaan ku dadaaleynaa inuusan dagaalka Cadalle dib dambe u soo noqon
Gudoomiyaha iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wakiillada Puntland oo caawa la kulmay Madaxweyne Farmaajo